Compro, mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်မှာစာရေးသူ
ထိုအတောအတွင်းကျွန်ုပ်တို့ဂုဏ်ယူဖြစ်ကြောင်းဖွင့်ဆိုရပေးနိုင်ပါတယ် Compro တစ်ဦးကြက်ညှာ 18 entries တွေကိုလှူဒါန်းခဲ့သည်။
Compro အားဖြင့် entries
ကျောင်းသားများ Gain ဖြတ်တောက်ခြင်း-Edge အသိပညာ
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 3, 2018 in ဘ‌‌လော့ခ်, သတင်း /by Compro
ကျောင်းသားများ Gain Edge "နွေဦးရာသီမူဘောင်" အသိပညာဖြတ်တောက်ခြင်း: ဒီအတိတ်ဒီဇင်ဘာလ (2017), mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံပါမောက္ခ Payman Salek နွေမူဘောင်များနှင့်ဆက်စပ်နည်းပညာများပေါ်တွင်အထင်ရှားဆုံးညီလာခံဖြစ်သောဆန်ဖရန်စစ္စကိုရှိ "SpringOne ပလက်ဖောင်းညီလာခံ" သို့တက်ရောက်ခဲ့သည်။ 2800 + တက်ရောက်, 145 + ဆွေးနွေးပွဲ, 200 + စပီကာ, 32 အဓိကနှင့် 43 စပွန်ဆာနှင့်အတူ, SpringOne ပလက်ဖောင်း 2017 "ရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်!" ခဲ့ [ ... ]
ဒီဇင်ဘာလတွင် 15, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ကျွန်ုပ်တို့၏ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ ( "ComPro (SM)") mum မှာက MS အစီအစဉ်အိုင်တီများအတွက်ကျောင်းသားများနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအောင်မြင်မှုပြင်ဆင်နေများအတွက်တကမ္ဘာလုံးလူသိများသည်။ အားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပါမောက္ခလိုပဲ, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွဲဘက်ပါမောက္ခဂျိုး Bruen ဒီထူးခြားတဲ့နှင့်မကြုံစဖူးပညာရေးအတွက်ကြီးမားသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်သည်။ နှစျခုအချက်များ [ ... ] အတွက်အလွန်အမင်းစက်မှုလုပ်ငန်း-အတွေ့အကြုံရှိဝါရင့်ဆရာ, ဆရာမများသင်ကြားမှုရှိခြင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျောင်းသားတွေဟာ '' အောင်မြင်မှုဆီသို့ဦးတည်
ComPro ကျောင်းသားများ 111 နိုင်ငံများအသင်း မှစ. Come
စက်တင်ဘာလ 3, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
'' ComPro '' ကျောင်းသားများအဆိုပါအစီအစဉ် (အနီရောင်စက်ဝိုင်းအထက်ပုံတွင်ရှိရာ mum တည်ရှိသည်။ ) ကြှနျုပျတို့၏ကွန်ပျူတာပညာရှင်များအတွက် US မှာမာစတာရဲ့အစီအစဉ်စာရင်းသွင်းကြပါပြီ (အထကျကိုကြည့်ပါ) ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း 111 လူအမျိုးမျိုးထံမှ 1996 ကတည်းက 111 နိုင်ငံများအသင်း မှစ. အတွေ့အကြုံရှိ software ကို developer များလာကြ , ခစျြစနိုးအဖြစ်လူသိများ '' ComPro, '[ ... ] နောက်ဆုံးပေါ်အဆင့်မြင့်လက်တွေ့ကျတဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး, အဆင့်မြင့်ပညာရေးအတွက်ထူးခြားတဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမ်းလှမ်း
သြဂုတ်လ 21, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
ပို့ကွန်ပျူတာသိပ္ပံမဟာထက် Multi-ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ: Multi-ယဉ်ကျေးမှုနေထိုင်မှု၏အကျိုးကျေးဇူးများ (ဤ LinkedIn တို့အုပ်စု, mum ဘရာဇီးကျောင်းသား Mauro Nogueira, PMP အားဖြင့်ဇူလိုင်လ 24, 2017, ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားတဲ့ဆောင်းပါးတစ်ဦးပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်: Computer ကိုပညာရှင်များမှာ စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်။ ) ကျနော်တို့ရှိခဲ့ပါတယ်အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဆင့်မြင့်ဒီဂရီဝင်ငွေထက်ကျော်လွန်တတ်၏။ ကျနော်တို့ [ ... ]a"ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ-အဆင်သင့်" ရရှိခဲ့
ဇူလိုင်လ 22, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
ဇွန်လ 24th တွင်, စီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကနေ 579 / 55 တိုးထက် 1 လူအမျိုးမျိုး-တစ်ဦးထက်ပိုထံမှဘွဲ့ရစံချိန်တင်အရေအတွက်3ပညာသင်နှစ်ဒီဂရီချီးမြှင့်။ [ ... ] ဒီနှစ်ဘွဲ့ရထက်ပို 60% ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဘွဲ့ဒီဂရီအတွက်သိပ္ပံမဟာလက်ခံရရှိနှင့်အကြောင်းကို 350 ၏ဤစုစုပေါင်းသစ်တစ်ခုတစ်ခုတည်းကျောင်းဆင်းပွဲကိုအမေရိကန်စံချိန်ဖြစ်နိုင်သည်
မေလ 22, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ်, Uncategorized /by Compro
အရှေ့အာရှရွေးချယ်ခန့်အပ်ရေးခရီးစဉ်: 1777 80 ကတည်းက 1996 လူအမျိုးမျိုးထံမှဘွဲ့ရ, ကျော်နှင့်အတူစီမံခန့်ခွဲမှု၏ Maharishi တက္ကသိုလ်မှကွန်ပျူတာပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်အဆိုပါကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ပညာရှင်များမာစတာရဲ့အစီအစဉ်, United States မှာအများဆုံး, ထူးခြားတဲ့လူကြိုက်များနှင့်အောင်မြင်သောကွန်ပျူတာသိပ္ပံက MS ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပါသည် 1000 လက်ရှိကျောင်းသားများကို။ အဆိုပါအစီအစဉ်ကို [ ... ] တစ်ဦး၏အဆင့်မြင့်ပညာရှင်များပေါင်းစပ်
ဒေတာကိုသိပ္ပံ Track Added သင်ရိုးညွှန်းတမ်း mum မှ
ဇန်နဝါရီလ 27, 2017 in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ဒေတာများကိုစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ကြီးမားကြီးထွားလာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကိုဘို့ငါတို့ကျောင်းသားများကိုပြင်ဆင်ထားရန်, mum ယခုကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်သင်္ချာကျောင်းသားတစ်ဦးမှာ Data သိပ္ပံ Track ကိုပူဇော်သက္ကာဘို့ဖြစ်ပါတယ်။ "ဒီနေ့ရဲ့ကိန်းဂဏန်းအချက်အလက်မောင်းနှင်ကမ္ဘာကြီးကိုလွှမ်းမိုးထားတဲ့ဒေတာများကိုသိပ္ပံသည်, Next ကိုမျိုးဆက်ကျောင်းသားများသည်အင်တာနက်များအတွက် key ကိုဖြစ်ပါသည်, အရာပါလိမ့်မယ် [ ... ]: mum ကွန်ပျူတာသိပ္ပံဦးစီးဌာနပါမောက္ခ Emdad Khan ကအလိုအရ
Times သတင်းစာစိန်ခေါ်မှုများနှင့်ကြုံတွေ့ခုနှစ်, mum ကို Safe & Friendly ဖြစ်ပါသည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 12, 2016 in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပညာရေးအတွက်နိုင်ငံခြားခရီးသွားများအတွက်တိုးမြှင့်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအချို့သောတစ်လောကလုံးကျောင်းသားအားလုံးအားဖြင့်မျှဝေစိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများ ... ရှိပါတယ်။ အမေရိကန်တက္ကသိုလ်လုံခြုံတော်မူမည်လော ငါပျော်ရွှင်တော်မူမည်လော ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေများနှင့်မိသားစုထံမှကုန်ကျစရိတ်နှင့်ခွဲခြာတန်ဖိုးရှိတော်မူမည်လော ဒါကြောင့်ငါ့အသက်ကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်နည်း [ ... ] 1996, 2800 ကနေခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80 ဆော့ဖျဝဲအင်ဂျင်နီယာများကတည်းက
mum ကျောင်းသား International Amazon ကဆုချီးမြှင့်ဆွတ်ခူး
နိုဝင်ဘာလ 11, 2016 in ဘ‌‌လော့ခ်, ကျောင်းသားအောင်မြင်မှုပုံပြင်များ /by Compro
mum ကျောင်းသား International ထိပ်တန်းပထမဦးဆုံးနှစ်အားကစားသမားအများပြည်သူအာရုံစိုက်မှုအများကြီးလက်ခံရရှိဖျော်ဖြေ, ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အားကစားခုနှစ်တွင်အမေဇုံ Award ဆုကိုဆွတ်ခူး။ အဆိုပါအိုင်တီစက်မှုလုပ်ငန်းများတွင်အမေဇုံ Amarbayar အတွက်ထိပ်တန်း "လူသစ်" သဘင် (Amar) Amarsanaa ရှိပါတယ်။ အမေဇုံပြည့်စုံ Technologies က DevOps (ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ Operations) အသင်းများအတွက်အလုပ်လုပ်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးနှစ်တွင်, Amar [ ... ] သည်သူ၏အလှူငွေ၏အသိအမှတ်ပြုမှုတွင် "လ၏တွဲဘက်" အမည်ရှိ
စက်တင်ဘာလ 23, 2016 in ဘ‌‌လော့ခ် /by Compro
ဒါဟာ Lucknow, အိန္ဒိယအတွက် 14 နှစ်အရွယ်ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးကကွန်ပျူတာသုံးစွဲဖို့သူ့ကိုယ်သူဆုံးမသွန်သင်စေခြင်းငှါဒါပုံမှန်မဟုတ်သောမဟုတ်ပါဘူး။ Promila ဗဟာဒူး 1991 ၌ဤစကားပြည့်စုံသောအခါမူကားအဘယျသူမဤအသိပညာနှင့်အတူလုပ်ခဲ့တယ်အလှနျပဲ 15 ကီလိုမီတာသူမ၏နေအိမ်ထဲကနေဆင်းရဲသားကျေးလက်ရွာ၌များစွာသောအမျိုးသမီးငယ်များ၏ဘဝတွေကိုပြောင်းလဲခဲ့ပါသည်။ ဘယ်အချိန်မှာ Promila [ ... ]
1 ၏စာမျက်နှာ 212
ကွန်ပျူတာသိပ္ပံတွင် MS ။ 2nd US တွင်အကြီးမားဆုံးဖြစ်သည်အောက်တိုဘာလ 25, 2019 - 4: 24 ညနေ